Real Life – Page 17 – Healthy Life Journal
– လတ်တလော အနုပညာလှုပ်ရှားမှု . . . မဂ္ဂဇင်းအတွက် အလှဓာတ်ပုံတွေရိုက်တယ်၊ ဂျာနယ်ဖိုတိုကာဗာတွေ ရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်၊ သီချင်း MTV တွေ ရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီလကုန်မှာတော့ ဒါရိုက်တာဦးမီးပွားရိုက်ကူးမယ့် ရုပ်ရှင်ကားကြီးကို မင်းသားအလင်းရောင်နဲ့ ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။ – အသားအရလှပဖို့အတွက် နေ့စဉ်ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းဖြစ်ပုံ...
အရမ်းပူတဲ့ ရာသီမှာ အပြင်သွားရင် အင်္ကျီလက်ရှည်ဝတ်ပြီး ထီးဆောင်းဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အန်တီခင်သန်းနွယ်
– လတ်တလောအနုပညာလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ ဘာတွေ လုပ်ဆောင်ဖြစ်နေပါသလဲ။ အန်တီကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ရုပ်ရှင်ကားတွေ၊ ဗီဒီယိုကားတွေ ရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။ – အန်တီတို့မိသားစုမှာ တစ်ယောက်ကျန်းမာရေးကို တစ်ယောက် ဘယ်လိုဂရုစိုက် အကြံပေးဖြစ်ပါသလဲ။ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတတွေ လေ့လာပြီး ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် သိသလောက်လေးတွေကို ပြောပြဖြစ်ပါတယ်။ ဘာရောဂါဖြစ်ရင် ဘာဆေးသောက်ရင်...
ဉာဏ်ရည်မမီပေမယ့် စွမ်းရည်ပြခွင့်ရပြီလေ . . .
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) “သားသမီးလေးဦးမှာ သူကတတိယသားပါ။ မွေးတုန်းက ၈၈ အရေးအခင်းမှာဆိုတော့ ကလေးမွေးရတဲ့အခြေအနေကလည်း နယ်အိမ်မှာပဲဆရာမနဲ့ မွေးရတယ်၊ မွေးရာပါစအိုမှာ အပေါက်မပါဘူး၊ အဲဒါကိုနောက်နေ့တွေမှာ ကလေးက နောက်ဖေးမသွားပါလား . . မသွားပါလားဆိုကာမှ စအိုအပေါက် မပါမှန်းသိတယ်၊...
ရတနာဗိုလ်၏ ကျန်းမာလှပ လူမှုဘဝ
အခုလတ်တလော ဂျာနယ်တွေ၊ မဂ္ဂဇင်းကာဗာတွေ ရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။ တခြားကြော်ငြာတွေလည်း ရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီနှစ်သင်္ကြန်ကတော့ မန္တလေး ဒါမှမဟုတ် နေပြည်တော်ကမဏ္ဍပ်တစ်ခုခုမှာ သီချင်းဆိုဖြစ်ဖို့တော့ ရှိပါတယ်။ အသားအရေမပျက်စီးအောင် ထိန်းသိမ်းပုံ အရမ်းပူပြင်းတဲ့နွေရာသီမှာ Sun Cream များများ လိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်သွားရင်လည်း လက်ရှည်အင်္ကျီတွေ ဝတ်သွားပါတယ်။...
ကျန်းမာရေးမှာအစားအသောက်က အဓိကကျလို့ သင့်တင့်မျှတအောင်စားလေ့ရှိတဲ့ အာဇာနည် နှင့် ဝမ်းမိသားစု
မေး ကိုအာဇာနည်ရဲ့လက်ရှိအနုပညာလှုပ်ရှားမှုလေးတွေ သိပါရစေ။ ဖြေ ကိုအာဇာနည်ကတော့ သီချင်းတွေ ဆိုနေပါတယ်။ နယ်ရှိုးတွေရော ရန်ကုန်ရှိုးရော ဆိုဖြစ်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ကြော်ငြာတစ်ခုလည်း ရိုက်ထားပါတယ်။ မေး ဒီနှစ်သင်္ကြန် ဘယ်မှာရှိဖို့ များပါသလဲ။ ဖြေ ကိုအာဇာနည်က ဒီနှစ်သင်္ကြန် တယ်လီနောမိုဘိုင်းမှာ...
– အစ်ကိုတို့မိသားစုက ဘယ်လိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေ လုပ်ဖြစ်လဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါ။ ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့က အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ကျန်းမာမှ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးကော အကုန်လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစ်ကိုတို့မိသားစုမှာ ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကူညီစောင့်ရှောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အစ်ကိုဆိုလည်း Gym ဆော့တယ်၊ ရေကူးတယ်၊ အားကစားလုပ်တာကလည်း ကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေတယ်၊...
မေ၏ ကျန်းမာလှပ လူမှုဘဝ
မေ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ လက်ရှိအနုပညာလှုပ်ရှားမှု ညီမအခု ပြက္ခဒိန်တွေ ရိုက်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ ညီမရဲ့ တစ်ကိုယ်တော်တေးစီးရီးအတွက် သီချင်းတွေ လုပ်နေပါတယ်။ ၅လပိုင်းလောက်တော့ ထွက်ဖြစ်ပါမယ်။ ဖိုတိုကာဗာတွေ ရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။ မေရဲ့ တစ်နေ့တာ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုပုံစံ . . မနက်မိုးလင်းရင် မျက်နှာကိုသေချာသန့်စင်အောင်...
သက်လုံးပုံ၏ ကျန်းမာလှပ လူမှုဘဝ
– အသားအရေမထိခိုက်အောင် နေဒဏ်ကာကွယ် အသားအရေလှပအောင် spa တွေသွားပြီး အရမ်းထိန်းသိမ်းတာမျိုး မရှိပါဘူး။ အပြင်သွားရင် လက်ရှည်အင်္ကျီဝတ်သွားတယ်။ နေရောင်ခြည်ဒဏ် ကာကွယ်နိုင်အောင် Sun Cream အမြဲလိမ်းပါတယ်။ တစ်ပတ်တစ်ခါတော့ Scrub လုပ်ပေးပါတယ်။ – သနပ်ခါး လိမ်းလေ့ရှိ မျက်နှာအသားအရေကိုတော့...
ဆန်းထွဋ်နှင့် ဇင်မင်းတို့၏ မိသားစုကျန်းမာရေးအကျင့်ကောင်းများ
– တစ်ယောက်ကျန်းမာရေးကို တစ်ယောက်ဘယ်လို ဂရုစိုက်ပေးပါသလဲ။ အစ်မတို့နှစ်ယောက်စလုံးက အသက် ၃၀ ကျော် ဝန်းကျင်ပိုင်းရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အလုပ်ကလည်း အရမ်းများတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီအတွက် အစာစားချိန်၊ အိပ်ချိန်မမှန်တာမျိုးရှိတော့ ပိုပြီးဂရုစိုက်ရတယ်၊ အဓိက ကိုဆန်းထွဋ်ကို အစ်မကပိုပြီး ဂရုစိုက်ပေးရတာ များတယ်၊ သူကအစ်မထက်ပိုပြီး အလုပ်များတယ်။...
ကျော်ကြားသူတို့၏ ကျန်းမာလှပ လူမှုဘဝ ရွှေသမီး
တစ်နေ့တာ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းမှုပုံစံ မနက်စောစောထပြီး လေ့ကျင့်ခန်းကို ၁၅မိနစ်လောက် လုပ်လိုက်တယ်။ ချွေးထွက်တော့ အသားအရေ အတွက်လည်း ကောင်းတာပေါ့။ ပြီးတော့ ရေများများ သောက်တယ်၊ မျက်နှာသစ်ပြီးတိုင်း တိုနာလိမ်းဖြစ် ပါတယ်။ ရွှေသမီး လုပ်နေကျ သဘာဝကုထုံး ညီမအသားအရေ လှပအောင်...